10 Qalabka Photoshop waa inaad isku daydaa (I) | Abuurista khadka tooska ah
Plugins iyo miirayaasha ayaa ka mid ah aaladaha loogu cambaareynayo adduunka naqshadeynta garaafka. Xaqiiqda ah inay fududeeyaan hawsha oo ay u rogaan geeddi-socodka shaqada natiijooyin xirfad leh wax ay heli karaan qof kasta oo sameeya nashqadeeyayaasha ayaa ka xumaaday oo qiimeeyays qiyaas wanaagsan.
Waxay ka dhigeysaa dhammaan dareenka, laakiin dabcan lama soo koobi karo. Marar badan annaga oo xirfadlayaal ah waxaan u baahan nahay helitaanka xalal wax ku ool ah oo dhakhso leh. Anigu shakhsiyan waxaan ka mid ahay kuwa sidaas qaba waad fiicantahay oo aad jeceshahay waxaad samaynayso waa inaadan cidna la dagaalin. Kaliya samee waxa aad sida ugu fiican u qabato. Qofka aan haysan aqoon ku filan wuxuu soo saari doonaa fikrado badan oo la isweydiin karo, halabuur iyo natiijooyin, iyadoon loo eegin waxyaabaha ku xiran iyo qalabka ay haystaan. Laakiin haye, waxaan ku wareegayaa baadiyaha aakhirkana ma dhahayo waxaan u imid inaan idhaahdo. Halkan waxaad ku leedahay xulasho ee toban plugins kuwaasoo aad ugu wanaagsan uguna xiisaha badan Adobe Photoshop. Qaybta labaad, si ka sii fiican oo ka wanaagsan. Iyaga ku raaxee!
Maaskaro dareere ah 3: Sameynta dalag sax ah waa mid ka mid ah howlaha ugu shaqada badan uguna adag ee ay tahay inaan wajaho berrinka isdabamarinta sawirada. Mid ka mid ah awooda qalabkani waa fudeydka ay bixiso iyo yareynta waqtiga howsha. Isticmaalka awooda balastarrada ugu fiican ee Photoshop waxay fududeyneysaa howsha waxayna u rogaysaa howl waqti dheer qaadan karta hab qaadan doonta daqiiqado yar. Waxaad kala soo bixi kartaa nooca tijaabada ah ee bilaashka ah Xiriirka soo socda (http://www.vertustech.com/fluidMask/overview.html).
Warshadda Knoll Light ee Photoshop 3.2: Waxaa qaabeeyay saamaynta gaarka ah ee guru ee ka caawiyay qaabeynta Photoshop iyo saamaynta gaarka ah ee filimka Star Wars. Waxay noqotay mid kamid ah kuwa loogu caansan yahay Adobe Photoshop iyo Adobe After Effects. Qalabkani wuxuu si weyn u furayaa muuqaalka ficil ee Photoshop uu noogu soo bandhigo qaabkiisa caadiga ah. Waxaa ku jira 76 horudhac ah oo waaweyn, ikhtiyaarka firaaqada-waqtiga dhabta ah iyo qalabka nalalka 19 si loo abuuro saameyn dhab ah oo caadiyan ah. Waxaad ka heli doontaa nooca tijaabada ah ee bilaashka ah halkan: (http://www.redgiant.com/products/all/knoll-light-factory-ps/updates/#tabs)
Sawirka Sawirka Sawirka 2.0. Muuqaal kale oo muhiim ah oo ku saabsan tafatirka sawirku waa daaweynta midabka sawirada. Qalabkaan waxaad ku dhajin kartaa shaashaddaada si qiiro leh dhowr guji. Waxay ka kooban tahay in ka badan 100 horudhac ah oo ay dhiirrigelisay mashruucyo ganacsi oo dhab ah waxayna ku saleysan tahay dabeecadaha kamaradaha xirfadeed marka la eego midabka si loo adeegsado midabyo macquul ah oo tayo sare leh. Shaqooyinkaagu waxay ku heli doonaan sharraxaadda filimada qaab aad u fudud. Ma rabtaa inaad hubiso waxa aan kuu sheego? Iska hubi adigoo soo dejinaya halkan tijaabada ah (http://www.redgiant.com/products/all/magic-bullet-photo-looks/updates/#tabs)
Mockups aragti: Saamaynta ay soo bandhigtay codsigan ayaa ah mid aad u qurux badan waxayna na siin kartaa joogitaan weyn haddii aan la shaqeyno majaajillo, inkasta oo aysan ku koobnayn mashruucan oo kale, haddana sida muuqata waxaan siin karnaa isticmaalka aan dooneyno. Waxay na siisaa dhowr habeyn iyo ikhtiyaarro qaabeyn ah si aan wax uga beddelo muuqaalkeeda iyo aragtideeda. Waad la qabsan kartaa sawiradaada dhamaan noocyada mashaariicda waana tan dhibic aad u wanaagsan. Qabso ee halkan bilaash ah (http://perspectivemockups.com)
Nooca Guddi 2: Caadi ahaan miyaad ka shaqaysaa mashaariic loo qaybiyay qaybo kala duwan sida 'triptychs' ama 'diptychs'? Haddii aad fursad u leedahay inaad kaga shaqeyso nooca noocan ah qalabkan, samee, asal ahaan maxaa yeelay si buuxda ayaa loo cusbooneysiiyaa waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku hesho natiijooyin la isku habeyn karo oo leh xorriyad ka weyn tan moodeellada suurtagalka ah ee aad keydsanaysay dhowr sano;) . La shaqeynta walxaha caqliga leh iyo maaskarada lakabku ma aha geedi socod wax duminaya oo waxaad mar walba gacanta ku haysaa dhammaan geeddi-socodka si aad u qaabaysid oo aad dib ugu dhigto haddii loo baahdo. Halkee isku dayi kartaa? Halkan! (http://lumens.se/tychpanel/)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 10 Qalabka Photoshop waa inaad isku daydaa (I)